Baydhabo Online | The best web site Music Online - News: Golaha Wasiirada inta ka dhiman oo Maalmaha soo socda la dhameystiri doono
Golaha Wasiirada inta ka dhiman oo Maalmaha soo socda la dhameystiri doono
Wararka laga helayo Madaxtooyada ayaa sheegaya in Madaxweynaha, Ra'iisul Wasaaraha iyo Gudoomiyaha Baarlamaanka ay shirar ay ka lahaayeen dhameystirida Golaha Wasiirada ay soo gaba gabeeyeen, iyadoo ay diyaarsan yihiin inta badan xubnaha noqon lahaa Wasiir kuxigeenada iyo wasiiru dowlayaasha.
Inkastoo Xukuumadan ay tahay mid yar, ayaa hadana la ogeyn in Wasiiru dowlayaasha iyo wasiir kuxigeenada ay ka badan doonaan Wasiiradii horay la magacaabay iyo in kale, ha yeeshee waxaa soo baxaya warar kala duwan oo sheegaya in min shan wasiiru dowlayaal iyo wasiir kuxigeeno la magacaabi doono.
Sidoo kale waxaa la hadal hayaa in wasiiru dowlayaasha laga dhigay 6-xubnood, halka wasiir kuxigeenada laga dhigayo afar, iyadoo wali aanay jirin tilmaamo cad oo muujinaya tirada loo kala qoondeeyay wasiiru dowlayaasha iyo wasiir kuxigeenada, balse waxaa la leeyahay kama badan doonto 10-xuxbnood.
Xubnaha qaar ayaa waxaa ku jira kuwo ku dhow Madaxweynaha, sidoo kale waxaa iska dhex arki doona beelo shaashada Wasiirada iska waayay, waxaa kaloo ku jira qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka iyo xubno la hadal haayo inay ahaayeen musharaxiintii u tartantay xilka Madaxweynaha.
Wararka ayaa sheegaya in bishan inta aanay dhamaan ay suura gal tahay in la soo magacaabo Wasiir kuxigeenada iyo wasiiru dowlayaasha, iyadoo maalmahan ay jireen olole ay wadeen siyaasiyiin badan oo ay ku doonayaan inay iska dhex arkaan muraayada golaha wasiirada Tafatiraha on December 11 2012
0 Comments · 171 Reads
Ila Qosol "Hawlahaa Arladaa"
2,250,044 unique visits Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2013 by Nick Jones.